सामान्य अवस्थामै उपचार गर्न आएकी बालिकाको मृत्यु
२४ आश्विन २०७८, आईतवार १२:१२ प्रकाशित
सुर्खेत । शुक्रबार दैलेखको नारायण नगरपालिका–४, की साढे दुई वर्षीया बालिका कुसुम कटुवाललाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भर्ना गरियो । चार दिनअघि नाकको प्वालमा मकैको दाना अड्केकी बालिका कटुवालको श्वाशप्रश्वासमा केही समस्या देखिएपछि परिवारका सदस्यले कुनै समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्दै जिल्ला अस्पताल दैलेख पु¥याएका थिए ।
तर, दैलेख अस्पतालमा उक्त दाना निकाल्ने उपकरण नभएको र प्रदेश अस्पतालमा राम्रो उपचार हुने भनेपछि रेफेर गराइदिएको थियो । परिवारका सदस्यले सहज रुपमा छोरीको उपचार हुने आशाका साथ प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पु¥याएका थिए ।
किनकी प्रदेश अस्पतालमा स्तरीय उपचार हुने दावी गरिएको थियो । प्रदेश अस्पताल पु¥याएपछि खासै समस्या नभएको तर पनि उक्त दाना निकाल्न केही असहज भएको भन्दै त्रिवि शिक्षक अस्पताल लैजानका लागि सुझाव दिइएको थियो ।
यद्यपि आईसियू भएमा प्रदेश अस्पतालमै उपचार हुने आश्वासन पनि दिएको थियो । सोही आशामा परिवारले काठमाडौं लगेर किन खर्च गर्ने ? जबकी नजिकै उपचार हुन्छ भन्ने भरोसामा कुरिरहेका थिए । तर, शुक्रबार राति अकस्मात चिकित्सक आफन्तकहाँ आए र बालिकाको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरिदिय ।
अलिकति नाकबाट श्वास फेर्नबाहेक अन्य केही भएको थिएन थिएन् ।’ उनी अघि भन्छिन्, ‘सामान्य दुखाई सुरु भएपछि पछि थप समस्या हुने डरले नानीलाई दैलेख जिल्ला अस्पतालमा लिएर गएकी थिएँ ।’ तर, दैलेख अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै दैलेखका डाक्टरले सुर्खेत लैजान सुझाब दिएपछि प्रदेश अस्पताल ल्याएको हो ।
सामान्य अवस्था भएकी छोरीको ज्यान डाक्टरकै लापरबाहीका कारण गएको भन्दै घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग कटुवालको छ । ‘मैले छोरीलाई धेरै समस्या नहोस् भनेर अस्पतालमा ल्याएकी थिए, मार्न होइन ? आक्रोशित हुँदै कटुवालले भनिन्, ‘मेरो श्रीमान वैदेशीक रोजगारीका लागि कतारमा हुनुहुन्छ ।’ उपचारमा समस्या भएपछि सुर्खेत रेफर गरिएकी बालिकाको उपचारमा संलग्न दैलेखका डाक्टर जगत थापाले बालिकाको ज्यान जाने अवस्था नभएको जानकारी दिएका छन् ।
यता प्रदेश अस्पताल प्रशासनले भने चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बालिकाको मृत्यु नभएको दावी गरेको छ । पीडितका आफन्तले चिकित्सकमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विकास केसीले बताए । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका चिकित्सकमाथिमा आरोपहरुमा पनि सत्य नभएको दावी गरे । ‘चिकित्सकको कुनै लापरबाही होइन, अप्रेशन गर्नुपर्ने केस हो । त्यसअघि बेहोस पार्ने औषधि लगायौं ।
मिसन टुडे न्युज साभार